Dianabol: Ungazvitora sei? Ndeipi mhedzisiro? [Dzidza CHOKWADI PANO!]
Cellulite: MUTUNGAMIRO WAKAKWANA WESANGO KUNA CELLULITE UYE KUTI UNGAPEDZE SEI!
Iyo inozivikanwawo seDBol, Dianabol iSteroid inogadzirwa muUnited States ine zano rakasiyana zvishoma kubva kune akawanda maSteroids: pachinzvimbo chekushandisa kwayo kunoitwa kuburikidza nemajekiseni, zvinoitwa nemapiritsi anoitwa nemuromo. Uye zvakare, inovimbisa kuwana kukuru musimba uye mhasuru.
Chinyorwa ichi chichataura zvishoma nezve hunhu hweiyi steroid, asi zvakafanira kuyambira kuti kushandiswa kweanabolic steroid kunogona kuunza njodzi dzehutano, asi kuishandisa nemazvo, nekutariswa kwechiremba uye kutarisirwa kwakakodzera, vanogona kuunza mabhenefiti mazhinji . Unoda kuziva zvakawanda? Saka ramba uchiverenga ichi chinyorwa!
Nhoroondo yaDianabol landerlan
Dianabol tenga , kana kuti, methandrostenolone, inonyatso kuzivikanwa munyika yevatambi uye vavaki vemuviri nekuda kwekugadzirwa seimwe yezvinhu zvekutanga zvakatorwa mu testosterone. Mushure make, mamwe akawanda mabhendi akaonekwa mumusika kuti aedze kutora chikamu cheiyo niche iyo yaakaziva yaakawana mukushandisa kweiyi steroid.
Yakatanga kuwanikwa muna 1960, uye munguva pfupi ikava inonyanya kushandiswa vanabolic steroid mune ese marudzi emakwikwi emitambo. Izvi zvaikonzerwa nekureruka kwekushandisa, pamwe nekugona kwemhedzisiro.
Dr. John Bosley Ziegler ndiye akatanga kugovera Dianabol mutengo (methandrostenolone) yevatambi veOlympic veUS. Mushure mekushandisa chinhu ichi, kuita kwevatambi kwaive kuri nani uye nekudaro, mabhenefiti aive akajeka.
Kugadzirwa kweDianabol muUS kwakaputika kwenguva yakati uye ndokuderedza zvakanyanya mashandisiro ayo. Mukupera kwema80 chigadzirwa chakabviswa mumusika, zvisinei, hachina kurasikirwa nemukurumbira, inoramba iri iyo inotengeswa zvakanyanya steroid yemuromo pamusika mutema.
Chii chinonzi Dianabol? Chii ichochi?
Dianabol haisati yagadzirwa pasi pezita iro kubvira ma1970. Nhasi uno chigadzirwa chinowanikwa saAnabol kana Andoredan.
Chinhu chinoshingairira chinhu ichi methandrostenolone, inoshandiswa nevanovaka muviri uye vanovaka muviri. Pamusoro pekuwedzera kwetsandanyama, Dianabol ave kuzivikanwa pasirese semumwe weanodikanwa naArnold Schwarzenegger.
Pakati pemusiyano wakaita kuti Dianabol ave nemukurumbira kwazvo muma1970, ichave nzira yekuishandisa, sezvo yaive chinhu chekutanga mumapiritsi.
Izvo zvaive zvisingachade kushandisa zvinorwadza jekiseni mhinduro kuti uwane mhasuru, kungomedza mapiritsi uye presto, mhedzisiro yacho yaishamisa.
Inotorwa senge ine simba anabolic steroid, ichinyanya kushandiswa kugadzirisa mashandiro emuviri nekuita, zvichiita kuti mhasuru dziite kunge dzakazvimba.
[junkie-tab] uye tora yako izvozvi! [/ junkie-tab] [/ junkie-tabo]
Molecular zita: [17a-methyl-17b-hydroxy-1,4-androstadien-3-imwe]
Molecular uremu: 300.44
Fusion poindi: N / A
Mugadziri: Ciba (Pakutanga)
Zuva rekusikwa chaiko: 1956
Inoshanda dosi: 25-50mgs (doses pazasi pe5mg uye pamusoro pe100mg inonzi)
Hafu yeupenyu: 6-8 maawa emumuromo fomu. Uye pakati pemaawa 48-72 mune jekiseni fomu.
Nguva yekutsvaga mumuviri: Kukura kupfuura mavhiki matanhatu
Anabolic / Androgenic Index (Musiyano): 90-210: 40-60
Anoshandura kuDHT: Usaiti
Kuchengetwa kwemvura: Hongu
High kumanikidzwa: Hongu
Ungatora sei Dianabol?
Kunge mamwe maSteroid, Dianabol anoshandiswa mumatunhu, ndiko kuti, seti nguva yenguva, kazhinji masvondo matanhatu. Kugadzikana kwayo, zvisinei, inobvumira iyo kuti ishandiswe munzira dzakasiyana:
Yokutanga ndeyekugadzira izvozvi zviwanikwa uye kukurudzira mukuita, mune zvidiki diki pazuva.
Nzira yechipiri iri pakati pemamwe macircuit emamwe maSteroid, kuitira kuti mhedzisiro inogadzirwa nechimwe chigadzirwa isarasike, mune yakaderera kwazvo dosi, pamwechete neiyo TPC.
Dianabol haina kukurudzirwa, kunyangwe mune zvidiki zvidiki, zvevakadzi.
Dianabol ane basa rakakura yakawedzera simba revashandisi vako, zvichikonzera kudzidziswa nehukuru hwakanyanya.
Nekubatsira kukuru kwekuvaka mhasuru, inogadzira yakakura nitrogen kuchengetedza - hunhu hune hukama ne hypertrophy, uye inoita kuti mhasuru dzioneke dzakazara, kunyangwe izvi zviri pamutengo wekuchengetedza kwemvura uye zvinokanganisa tsananguro yemhasuru.
Kushandiswa zvakare kune anti anti catabolic chiito, kudzikisa mazinga ecortisol kusvika 70% uye kudzivirira muviri kubva mukugadzira maseru emasumbu esimba uye nekudaro zvichikonzera mutambi kumisikidza kuwana mhasuru.
TPC - Post-kutenderera kurapwa ndeyei?
Kune avo vasingazive, post-kutenderera kurapa kuri nezve kushandiswa kwemishonga kudzikisira kana kupedzisa mhedzisiro yakaipa iyo anabolic steroid ichaunza zvirokwazvo kumuviri wako. Izvo zvichave nechokwadi chekuti iwe unoramba uine hutano uye usarasikirwe nemhasuru kuwana.
Mune mamwe mazwi, iyo TPC ndiyo nguva iyo muviri wako uchapora pamberi pekuti mamwe madosi eanabolic steroid atorwa, kuitira kuti mabhenefiti echinhu achengetedzwe.
Muchokwadi, TPC inoshanda zvakanyanya kudzikisira iyo yakaipa mhedzisiro yeanabolic steroid, ichiita kuti muviri uzvigadzirire wega kuti uwane mamwe madosi echinhu, kudzikisira zvakashata zvinogona kukonzerwa.
Kuti uite CPT, zvakanaka kuti iwe ugadzire tafura yekudzosa, iyo inosanganisira kupfeka "vadziviriri" kazhinji kwemavhiki matanhatu.
UNODA KUZIVA ZVESE NEZVE TPC? DZVANYA PANO!
Dianabol Inoita Kuti Ive Yakasimba Chaizvo Here?
Uye zvakare, chinhu ichi chinogona kupa mamwe akawanda mabhenefiti senge: Tsananguro yepamusoro yemhasuru, simba rakawedzera, kurasikirwa kwecaloriki, kuderedzwa kwemafuta munzvimbo, pakati pevamwe.
Ndeupi muyero wakakodzera?
Muyero wakaringana unogona kusiyana nenyika uye mugadziri. Uye zvese zvinoenderana nechinangwa chemunhu wega wega, uye nenzira iyo chinhu chakabatwa. Nekudaro, iwo ekutanga kuraira nhungamiro yakaratidza muyero wezuva nezuva we3 kusvika 6 we5mg, kana 15 kusvika 30mg pazuva.
Asi kunyangwe nemhedzisiro inokwanisa kuunzwa nemuviri wepasi uyu, ichinyatsoita mukuvandudza mashandiro, vatambi vazhinji vanotora huwandu hwakakura.
Izvo zvakakosha kuyeuka kuti kuwedzera iyo dosi kunogona kuwedzera ipapo mhedzisiro.
Dianabol Ane Madivi Ekupedzisira?
Sezvimwe neanabolic steroid, kana ikasashandiswa mushe uye nehunyanzvi manejimendi, zvinogona kukonzera kuita kwakakomba. Uye zvirokwazvo unofanira kunge wakanzwa nyaya yakadaro.
Naizvozvo, usati watanga kuitora, zvakakosha kuti iwe uzive njodzi dziripo. Isu tinonyora zvakajairika zviri pazasi.
Yakanyanya chepfu kuchiropa
Zvinokonzera kuchengetedzwa kwemvura
Kuwedzera kweoiri paganda, zvichikonzera acne uye nhema
Kukura kwebvudzi kumeso nemuviri
Akawedzera mazamu mazamu (Ginecomastia)
Yakaunganidzwa mafuta kuwanda
kusvotwa uye kurutsa
Kukanganisa kwekuenda kumwedzi
Ichiri kugadzirwa here?
Sezvatatotaura, Dianabol akamira kuburitswa pasirese muma80's uye hazviwanikwe kuwanikwa pasi pezita iri.
Nekudaro, zvigadzirwa zvakafanana zvinotorwa kubva kune ino steroid zvinogona kuwanikwa pamusika pasi pemazita akasiyana: Anabol e Andoredan iyi mienzaniso miviri.
Inogona kuwanikwa pese pamahwendefa uye mune injekiseni fomu.
Giants Mafomula- Maitiro ekukura zvakasununguka!
Imwe nzira yechisikigo yekuti iwe ukunde hofori muviri, iine inoshanda yakawanda kuwana, chirongwa ichi Hofori fomula.
Chirongwa ichi chakagamuchirwa naRicardo de Oliveira, mudzidzisi wezvekudzidzira muviri, uyo parizvino anopa mazano pakudya uye kuvaka muviri kune vanhu vazhinji muBrazil nekune dzimwe nyika.
Achifunga kugadzirisa kusahadzika kwevanhu vazhinji nezvekuwedzera mhasuru, Ricardo akaona muGiants 'Fomula mukana wekubatsira vanhu kuti vawane chakavanzika chechokwadi cheihofori. Anodya chii? Chii chavanoshandisa? Vanodzidzisa sei?
Iyo hofori fomula yakasikwa zvakanyanya kuitira kuti vanhu vakwanise kudzidza nekukurumidza, nenzira uye nekuchengeteka, maitiro ekuwedzera mhasuru, kuburikidza nekushandisa kweanabolic steroid.
Iyo Giants 'Formula chirongwa chakagadzirwa naRicardo Oliveira, uyo akapedza kudzidza mune zvemuviri, parizvino anodzidza zvinovaka muviri uye anopa kubvunza kuzviuru zvevanhu muBrazil vese vanoda kuwedzera mhasuru, mukongiri uye nekukurumidza nzira, kuburikidza nekushandisa kweanabolic steroids , chikafu chemhando yepamusoro uye kudzidziswa kwakasarudzika.
Mumwe wemibvunzo yakabvunzwa nevadzidzi vake mumakomisheni yaive chaiyo nzira yekuwedzera 10kg mumwedzi inokwana mitatu uye kukura.
Logo neiyo Giants 'Fomula, Ricardo achadzidzisa iyo "Chakavanzika" yekuti ungave sei GIANT. Nemazano anoshamisa uye neruzivo iwe kwausingakwanise kuwana chero kumwe kunhu.
Chirongwa ichi chakakwana, uye chine mabhuku matanhatu edhijitari paunodzidza zvinoshanda, zviri zvechokwadi, nenzira yakapfava uye inoshanda. Pamusoro pemabhuku edigital ane ruzivo rwese rwaunoda, iwe zvakare une mvumo yekuwana rutsigiro rwakakodzera kuti upindure mibvunzo yako yese.
Ndekupi kwekutenga Giants Fomula?
Iyo Giants Fomula inotengeswa CHETE pane mutengesi webhusaiti. Mune mamwe mazwi, kuburikidza nepamutemo webhusaiti yeiyo Giants 'Fomula.
Kutenga chirongwa ichi kuburikidza newebsite yepamutemo, unovimbisa kutenga kwakachengeteka zvachose, pamitengo inodhura, inokodzera muhomwe yako, chivimbiso chekugutsikana chinoita kuti kutenga kwako kuve kusina njodzi zvachose, pamusoro pekuwana chirongwa chepakutanga, chizere nezvakanaka nezvakanaka .
Ndizvozvo, kutenga chirongwa chako uye kutanga shanduko yemuviri wako izvozvi zviri nyore kwazvo! Kutanga, iwe unowana iyo webhusaiti yepamutemo, https://formuladosgigantes.com/, ita muripo wako nenzira yakachengeteka uye yakavanzika, uye presto, iwe uchagamuchira iyo link yekudhawunirodha mabhuku edhijitari uye unakirwe ese mabhenefiti echirongwa.
Tora mukana wemitengo yakanyanya kudhura, Mabhuku matanhatu edhijitari uye maawa makumi maviri nemasere ekutsigirwa nezvikamu gumi nezviviri zveR $ 6 kana R $ 24 nemari.
UNODA KUZIVA PAMUSORO PENYAYA YAKANYANYA? DZVANYA PANO!
Chirongwa chakakwana zvakakwana uye chakagadzirirwa kuti iwe ugone kuwana zvinoshamisa mhedzisiro. Ona pazasi zvaunodzidza neGiants 'Fomula uye izvo zvausingaite:
Uchapupu kubva kune avo vanobvumidza mhedzisiro
Avo vakaedza iyo Giant's Fomula Chirongwa vakabvumidza uye vakavimbisa mhedzisiro. Munguva pfupi ivo vakakwanisa kuona mhedzisiro uye vakadzidza kushandisa steroid zvakachengeteka, vachitevera mirairo yese.
Tarisa uone mimwe mishumo kubva kune vamwe vanhu vanokurudzira iyo Giants 'Fomula:
Chii chinosanganisirwa muchirongwa?
Kune mabhuku matanhatu edhijitari ayo achakubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako nekukurumidza uye zvine mutsindo. Aya mabhuku matanhatu anoumbwa ne:
Pfungwa dzehofori: Iine zvese zvaunoda kuti uzive usati watanga steroid. Ruzivo rwezvinobatsira uye zvinokuvadza mhedzisiro, pamakemikari, kudyidzana neiyo muviri, pakati pevamwe.
Steroid mahedheni: 14 mienzaniso yeakagadzirirwa-akagadzirwa macircuit ayo anozoshandura iwe kuita hofori.
Nhoroondo yesteroids: Iri bhuku rinokuratidza iyo yakanyanya kushandiswa steroid pasi, mashandiro ayo, nezvimwe, kuti iwe ugone kumisikidza yako kutenderera nenzira kwayo.
Chikafu cheSteroids: Mienzaniso yezvikafu zvaunofanira kutevedzera, uye iwe unozodzidza kuverenga zvaunoda zvichienderana nehurefu hwako uye huremu.
Anabolized kudzidziswa: Mienzaniso yekudzidzira kutevedzera kwemazuva mashanu, kuitira kuti mhedzisiro yako iwedzerwe.
Fomati yeVamwarikadzi: Bhuku rakanangana nevateereri vechikadzi, nemazano uye ruzivo nezve dhayeti, kuonda, kuwanda, mienzaniso yevanabolic steroid kutenderera kwevakadzi, pakati pevamwe.
200 Anabolic Mapoka: Anoshanda mabikirwo, nyama, hove, huku, nyama yenguruve, chisvusvuro, zvinwiwa uye zvimwe, kuti iwe uwedzere kudya kwako uye kuti zviwedzere kunakidza.
[junkie-alert style = "red"] Saiti iyi ndeye ruzivo rwezvinangwa chete! Hatikurudzire kushandiswa kwesteroids [/ junkie-alert]
Uye zvino wakafarira chinyorwa here? Ndichine mibvunzo nezve Dianabol? Siya yako yekutaura!
sei kutora dianabol
chii chinonzi dianabol
zvese nezve dianabol
dianabol kupi kutenga
tpc ye dianabol
dianabol landerlan nzombe
sei kutora dianabol zvakachengeteka
dianabol hi tech inoshuma
dianabol mapiritsi zana
dianabol divi mhedzisiro
dianabol yemusika wakasununguka
mhoro tech mishonga yemishonga dianabol
dianabol 90 makapisi
kupi kutenga dianabol
kutenderera ne dianabol
pamberi uye mushure dianabol
dianabol methandienone mhedzisiro
dianabol kutenderera kwevanotanga
dianabol 90 tabo
nzira yakanakisa yekutora dianabol
dianabol landerlan mutengo
49 pfungwa pa "Dianabol: Zvese Nezve Imwe Yeanonyanya Kuzivikanwa Anabolics!"
Nyamavhuvhu 1, 2015 pa11: 06 pm - pepeta
Nzira yekutenga diansbol
Ndira 17, 2017 pa07: 30 pm - pepeta
Zvita 1, 2015 pa22: 36 am - pepeta
Mhoro husiku hwakanaka, handisati ndamboshandisa vanabolic steroid muhupenyu hwangu, asi ndaifarira kwazvo dianabol uye ndatozvitenga, asi ini ndoda kuziva kuti ndinoita sei tpc ini ndoda kuita zvese zvakanaka kuti ndiwane zvirinani uye chengeta izvo Ini ndichawana mumhasuru, ndapota tumira kune yangu e-mail zvigadzirwa ndezvipi uye kuti ungazvitora sei mushure mekuita kutenderera, ini handisi wekutanga mukuvaka muviri ndanga ndichienda kunzvimbo yekurovedza muviri kwegore uye hafu, ndakamirira mhinduro yako ndatenda.
Carlos Ferreira gulart mwanakomana
Zvita 7, 2015 pa02: 29 am - pepeta
Mhoro wakadii. Ndichatanga Kutora DIMABOL Ndinoda kuziva kuti mangani mapiritsi aunonwa pazuva uye kana zvichibvira ndipe tpc ndatenda pamberi
Kurume 23, 2017 pa18: 15 pm - pepeta
Zvirinani kuti iwe uende kuna chiremba wemitambo kana endocrinologist pane kutsvaga maforamu emhinduro.
Zvita 15, 2015 pa14: 50 am - pepeta
Tarisana neiyi tpc mushonga uye kushandisa mushure memasvondo matanhatu evhiki kana mushure mekushandisa kwekupedzisira kwezuva rimwe chete
Ndira 12, 2016 pa03: 24 pm - pepeta
Organshild Optimal TPC, TPC inofanirwa kuitwa mushure mekutora ese mapiritsi. Ndinokurudzira kunwa mvura yakawanda uye kucheka ma carbohydrate uye kushandisa mapuroteni mazhinji.
Kukadzi 17, 2016 pa10: 50 am - pepeta
Iwe ungade here kuziva kuti chii chinoitika kana ukarega kuitora vhiki nhanhatu dzisati dzapera?
Chikunguru 6, 2016 pa21: 51 am - pepeta
Iwe haufarire iyo yese DBOL mhedzisiro. Zvisinei, iwe unofanirwa kuita TPC.
Kurume 13, 2016 pa22: 17 pm - pepeta
Mhoro makorokoto neruzivo!
Ndine 1,78m 75kg ectomorph, yakanyatsotsanangurwa ...
Ndiri kuzoshandisa Diana, kuti ini ndiwane zvirinani mhedzisiro nazvo zvingave zvakanaka kunamatira kuchikafu uye kuwedzera ne Whey neBcaa kana izvo zvinowedzerwa zvingave mari zvakapambadzwa panguva yekutenderera?
Ini ndinomirira nemwoyo wese mhinduro yako .. Kumbundira!
Chikumi 8, 2016 pa18: 53 pm - pepeta
murume, kana iwe uchizoita kutenderera mune ino kutenderera kana zvisinei kuti ndeipi kutenderera iri, iwe unofanirwa kuisa zvinowedzera mukati mekutenderera
Kurume 18, 2016 pa04: 11 pm - pepeta
shamwari inodikanwa Douglas paunonyanya kumedza mamwe mapuroteni akadai se (whey protein, albumin, carnivore)
ichave mhedzisiro yakanyanya, mune mamwe mazwi, ichakubatsira iwe kuwana yakawanda mhasuru mashoma kuwedzera "!
sezvo muviri wedu uchiti:
Nyamavhuvhu 10, 2016 pa18: 43 pm - pepeta
Uye mavitamini uye zvicherwa, varipi?
Sezvo zvese zvatinoda ndezvekuti: "Mapuroteni, Carbohydrate uye Mafuta".
Shamwari, ini ndinokurudzira kufunga zvakanyanya nemusoro wako uye zvishoma nemhasuru dzako!
Kurume 27, 2016 pa11: 08 pm - pepeta
Hatifanire kutora chero chinhu chisina kupfuudzwa nachiremba. Tinogona kuve nekurwadziwa kukuru kwemoyo. Kutora uye kuzviuraya.
Kurume 28, 2016 pa07: 00 pm - pepeta
Ini ndichatanga kutenderera kwangu nhasi, ndinoda kuziva kana panguva yekutenderera ndinofanira kutora mumwe mushonga kana kungoita dps kunyangwe mu tpc?
Chikunguru 6, 2016 pa21: 56 am - pepeta
Munguva yako unogona kushandisa silymarin.
Ipapo TPC CLOMID + TAXIMOPHENE.
PANGUVA yekushandisa HCG.
Kubvumbi 24, 2016 pa18: 33 pm - pepeta
Jisi remoni rakachena rinocheka mhedzisiro ye dianabol
Kubvumbi 30, 2016 pa15: 39 pm - pepeta
ndinogona here kushandisa dianabol ine androgen 300?
Chivabvu 5, 2016 pa16: 00 pm - pepeta
Manheru akanaka, handisati ndamboshandisa vanabolic steroid muhupenyu hwangu, asi ndinofarira dianabol uye ndakatombozvitenga, asi ndinoda kuziva kuti ndinoita sei tpc ini ndoda kuita zvese zvakanaka kuti ndiwane zvirinani uye chengeta zvandichawana mumhasuru, ndapota nditumire e-mail yangu ndezvipi zvigadzirwa uye kuti ungazvitora sei mushure mekuita kutenderera, ini handisi wekutanga mukuvaka muviri ndanga ndichienda kunzvimbo yekurovedza muviri gore nehafu, ndakamirira mhinduro yako ndatenda.
Gumiguru 25, 2017 pa20: 59 am - pepeta
Chivabvu 26, 2016 pa07: 09 pm - pepeta
Mhoroi, ndeipi mishonga yekuita TPC panguva yekutenderera kwaDiana.ndatenda
Chikunguru 6, 2016 pa21: 53 am - pepeta
Chikumi 8, 2016 pa00: 20 pm - pepeta
Mhoroi.Ini ndichatanga kutora dianabol, mangani andinofanira kutora zuva ...
Uye ndeupi mushonga weTpc panguva uye mushure mekutenderera? Ndatenda!
Chikumi 20, 2016 pa09: 08 pm - pepeta
Unotora mishonga ipi? mushure me6 vhiki dianabol kutenderera !!
Inoita TPC CLOMID + TAXIMOPHENE
Chikunguru 2, 2016 pa15: 04 am - pepeta
Mhoro..Ndinoda kuziva kuti mangani mapiritsi e dianabol andinofanira kutora pazuva ... handisati ndamboishandisa
Chikunguru 12, 2016 pa08: 08 am - pepeta
Mhoro…. zvakanaka… .Ndingade kuziva kuti mangani mapiritsi andinofanira kunwa pazuva re dianabol uye ndinodawo kuziva kurapwa kwandinofanira kupa mushure meCYCLE… Maita basa
Nyamavhuvhu 5, 2016 pa00: 00 pm - pepeta
Mhoroi ndiri kushandisa dianabol ndinoda kuziva ruzivo nezve ino kutenderera ndizvo zvandinofanira kutora panguva uye mangani mapiritsi andinofanira kutora pazuva ndapota ndibatsireiwo sezvo ndiri kunetseka kuti handisati ndambotora watzap 84992105352
Nyamavhuvhu 12, 2016 pa15: 56 pm - pepeta
Iwe unofanirwa here kutora tamoxifen panguva yako kutenderera kana mushure meako kutenderera?
Nyamavhuvhu 29, 2016 pa21: 18 pm - pepeta
Ndiri kuzvitora, ini ndaida kuziva kuti mangani zuva randinofanira kutora mukutenderera
Nyamavhuvhu 3, 2016 pa10: 39 pm - pepeta
Chii chandinofanira kutora mushure mekutenderera kwapera?
Nyamavhuvhu 9, 2016 pa11: 21 pm - pepeta
Ndanga ndichitora dianabol 10mg pazuva kwemwedzi, ndinoda kuziva kana ndichigona kupedzisa mazuva makumi mapfumbamwe, kana zvingandirwadzisa Q ndiri mukadzi, uye ndeupi Q wandinofanira kutora kana ndapedza?
Gumiguru 17, 2017 pa02: 59 am - pepeta
Tarisa, Diana haafanire kudyiwa nevakadzi, kunze kwekunge iwe usingafunge nezve uyerogenic mhedzisiro.
Gumiguru 8, 2016 pa22: 05 am - pepeta
Lucélia Ndakatenga iyo cirimalon! Uye mhedzisiro yako iri sei?
Gumiguru 14, 2016 pa16: 36 am - pepeta
Mbudzi 13, 2016 pa 18:51 - pepeta
Vakomana, pane chero munhu angandiudze kana Dbol inogona kukonzera hutachiona hweganda? Ndakatanga kuitora uye mushure mevhiki kwakabuda mhando yebvudzi rakadzika iyo mushure memazuva mashanu yakandiendesa kuimba yekuvhiya, nhasi ndine gomba rakakura mugumbo.
Mbudzi 17, 2016 pa 01:07 - pepeta
Ndiri pane kutenderera, iwe unokurudzira post kutenderera?
Chii chandinofanira kuita, uye sei?
Mbudzi 17, 2016 pa 12:44 - pepeta
Mhoroi Ni! Kana iwe uchiri nemibvunzo nezve kutenderera, TPC uye nenzira kwayo yekutora vanabolic steroid, tinokurudzira kuti iwe uzive iyo Giant's Fomula. Iyo kosi ikirasi chaiyo pane izvi zvidzidzo. Dzvanya pazasi: http://bit.ly/curso-online-formula-de-gigantes
Ndira 18, 2017 pa20: 28 pm - pepeta
Ndeapi maDiana anonyanya kushanda TPC mishonga?
Kurume 17, 2017 pa11: 01 pm - pepeta
Ini handizoshandisa chero TPC, iyi mishonga inongowanikwa nemushonga uye kune vakadzi vane gomarara repazamu, ini ndatotora vanabolic steroid saDece, Sustanon, Hemogenin naWinstrol handina kumbobvira ndawana chero chinhu chisina kujairika.
Kurume 17, 2017 pa18: 46 pm - pepeta
Chii chinonzi TPC?
Kurume 23, 2017 pa17: 56 pm - pepeta
'Post-Cycle Kurapa' Jorge. Izvo zvinofanirwa kuitwa chero iwe paunopedzisa kutenderera, ingave yakareba kana pfupi pfupi, kudzivirira kwakakosha kurasikirwa kwezviwanikwa zvakawanikwa, mukuwedzera kune 'zvishoma' kudzikisira nhengo dzinogadzira vanabolics.
Chivabvu 16, 2017 pa22: 34 pm - pepeta
TPC (To Ready to Eat) vakadzi vacho, sechibhorani, kunyange kutaridzika kunge Skill chibooreso
Chikumi 20, 2017 pa11: 31 pm - pepeta
Ndanga ndichitora mapiritsi e dianabol kwemazuva makumi matatu nemashanu, ini ndine makore makumi mashanu nemaviri.
Ini ndakangowana makirogiramu mashanu ehuremu, asi ndakawana simba rakawanda uye hapana chandinacho chisina kujairika.
Chikumi 29, 2017 pa13: 49 pm - pepeta
masikati akanaka, ini ndakatanga kutenderera ne dianabol uye ndiri kuitora zuva rega rega, zvirinani kuichengeta nenzira iyoyo kana kushandisa mazuva ese?
Nyamavhuvhu 20, 2017 pa21: 23 pm - pepeta
Manheru akanaka, handisati ndamboshandisa vanabolic steroid muhupenyu hwangu, asi ndinofarira dianabol uye ndakatombozvitenga, asi ndinoda kuziva kuti ndinoita sei tpc ini ndoda kuita zvese zvakanaka kuti ndiwane zvirinani uye chengeta zvandichawana mumhasuru, ndapota nditumire e-mail yangu ndezvipi zvigadzirwa uye kuti ungazvitora sei mushure mekuita kutenderera, ini handisi wekutanga mukuvaka muviri ndanga ndichienda kunzvimbo yekurovedza muviri Makore gumi nehafu, ndakamirira mhinduro yako ndatenda.
Kubvumbi 19, 2018 pa14: 52 pm - pepeta
Kungoseka neruzivo rwakawanda zvisizvo ,,, TPC (post kutenderera kurapa) kunoitwa mushure memasvondo gumi kusvika gumi nemaviri, mushure mekushandisa kwekupedzisira, nguva inoenderana nezvaunotora, kana kubaya.
Chikunguru 10, 2018 pa21: 24 am - pepeta
Mhoroi, ndanga ndichizvibvunza kuti kana mhedzisiro yezvatinoshandisa yakaenzana nemhedzisiro yemapiritsi ??? Ndipindure ndapota.
Maitiro ekunyorovesa bvudzi kumba
Electrolipophoresis: Unoziva here kuti iyi nzira ndeyei?
Kuvaka muviri: Tsvaga ese mabhenefiti ekuita uyu mutambo uye nekuchinja maitiro ehupenyu hwako